I-Cosy Suite kwi-Davie Ranch w/ Indawo yokungena yaBucala
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguSebastian
Indawo epholileyo, esandula ukulungiswa kwi-Davie Ranch. Le ndawo yasemaphandleni yeparadesi inazo zonke izibonelelo oya kuzifuna kumntu o-1 okanye o-2 ukuba abuyele emva kwaye aphumle. Izimele kwaye ibekwe kwindawo ezolileyo, indawo yokungena yabucala enebhafu enye epheleleyo. 1 INDAWO YOKUPAKA SIMAHLA.
Ibekwe kufutshane nezinto ezinomtsalane zalapha ekhaya ezifana neSawgrass Mall, BB&T Centre, Hard Rock Stadium, Hard Rock Hotel & Casino, Museum of Science and Discovery, iilwandle zasekhaya, Flamingo Gardens Wildlife Sanctuary, Everglades Holiday Park, Nova U.
I-suite ibandakanya i-Super high speed WIFI, i-Smart TV ekhoyo xa ufuna ukuphumla kwaye ubambe uchungechunge lwakho oluthandayo. I-Decor ikumgangatho ophezulu kwaye iyunithi ihlaziywa ngokutsha ukuya kwinqanaba eliphezulu. Uya kuza kwaye uhambe ngokuthanda kwakho usebenzisa ukungena kwakho. Ungangena ngokusebenzisa thina okanye sinokwenza amalungiselelo okuzihlola ngokwakho, ukuba uyathanda.
- Ibhodi yoku-ayina
- Ukufikelela ngokuthe ngqo kwigumbi lokuhlambela eligcweleyo elineshawari
Indawo yethu ifanelekile:
-Uhambo lomntu omnye
-Uhambo oluNcinci loSapho
- Abahambi kwishishini
- 20 imiz ukusuka eFt. Isikhululo seenqwelomoya saseLauderdale
-Imizuzu engama-25 ukusuka eDowntown Ft. Lauderdale kunye noLwandle
-Imizuzu engama-35 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseMiami
- 40 imiz ukusuka Downtown Miami
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Davie